Sida loo dhigo sagxadaha sagxadda leh inta u dhaxaysa qolalka | Qurxinta
Maria vazquez | | Qurxinta
Dabaqyada lakabyada Waxay yihiin ikhtiyaar aad u fiican oo lagu beddelo guryaha hadda jira. Waxa kale oo lagu dhejin karaa dhammaan qolalka, sidaas darteed siinaya isku mid ah dhammaantiis oo ka caawinaya inay qolalku u muuqdaan kuwo waasac ah. Laakiin sida loo dhigo sagxadaha laminate inta u dhaxaysa qolalka?
Faa'iidooyinka sharadka sagxadaha laminate waa badan yihiin, laakiin mid ka mid ah kuwa ugu muhiimsan waa iyada rakibo fudud. Si loo rakibo iyaga lagama maarmaan ma aha in la saaro sagxadda hore ee hore haddii ay tahay mid siman oo ku filan in lagu dhejiyo looxyada "guji". Waxay u muuqataa mid fudud oo waa sida aad waqti u heli doonto inaad ku ogaato maqaalkan.
1 Isla dabaqa guriga oo dhan
2 Faa'iidooyinka sagxadaha laminateerka?
3 Sidee loo dhigaa sagxadda laminateerka?
3.1 nidaamka guji
Isla dabaqa guriga oo dhan
Sannado badan, waxa caadiga ah ee guryaha ayaa ahaa in la dhigo dabaqyo kala duwan oo ku yaala jikada iyo musqulaha, qolalka u baahan sagxadaha kuwaas oo u adkeysanaya qoyaanka marka loo eego alwaax sida caadiga ah loo doortay guriga intiisa kale. Maanta, si kastaba ha ahaatee, labadaba sagxadaha laminateerka iyo sagxadaha vinyl-ka qoyaanka u adkaysta ayaa sameeyay ku rakib isla dabaqa guriga oo dhan noqoto mid shaqaynaysa.
Laakiin ma aha oo kaliya inay shaqeyso, sidoo kale waa beddel soo jiidasho leh oo ka soo jeeda dhinaca bilicsanaanta. Gaar ahaan, guryaha yaryar kaas oo mitirka laba jibaaran yahay aan la dhaafin oo la go'aamiyo in la furo meelo bannaan, maadaama dabaqa isku midka ah uu ka qaybqaato ballaarinta. Laakiin tani ma tahay sababta kaliya ee lagu midaynayo? Haba yaraatee!
Dhigista isla dabaqa waxay midaysaa nidaamka naqshadaynta guriga. Muuqaal gaar ah oo soo jiidasho leh oo ku jira guryahaas oo qolka fadhiga iyo jikada ama qolka jiifka iyo musqusha wadaagaan booska, tan iyo wax ku biirin wada noolaanshaha iyaga ka mid ah.
Adigoo siinaya sinnaanta dabaqa oo aan isbeddel ku samayn jaranjarooyinka albaabada, marka lagu daro, qolalku waxay u muuqdaan kuwo waasac ah.
Khataraha safarka way baaba'aan taas oo ka iman karta isbeddelada heerka ka soo jeeda isbeddelada laamiyada.
Waxaan helnay gariir aad u badan hadda iyo ugu yar.
Faa'iidooyinka sagxadaha laminateerka?
Waxaan si qoto dheer uga hadalnay faa'iidooyinka sagxadaha laminateerka, dabaqa lagu soo saaro lakabyo ku salaysan faybar cufan oo sarreeya oo dhejis ah oo la isku duubay si aan macquul ahayn, haddii aynaan ku celin nafteena. Waxaan dib u eegis ku samaynaa oo kaliya kuwa ugu muhiimsan, oo haddii aad xiisaynayso waxaad akhrin kartaa faa'iidooyin iyo faa'iido darrooyin badan maqaalkeenii hore.
Xiro ilaalinta: Dhammaystirkeeda lakabyo badan ayaa bixisa heerka iska caabbinta xidhashada kaas oo ka sarreeya shuruudaha caadiga ah ee deegaanka ganacsiga.
Hypoallergenic iyo bakteeriyada: Bakteeriyadu waxay u baahan tahay cunto iyo qoyaan si ay u koraan, iyo hermetically shaabadeeyey, oo si sahlan loo nadiifin ee sagxadaha laminate ee tayada leh ayaa ka hortagaya tan. Tani waxay si dabiici ah u siinaysaa nadaafad heer sare ah, iyada oo aan lahayn jeermis-dileyaasha kiimikaad. Sidaa darteed, waxay yihiin beddel xiiso leh kuwa haysta xayawaanka rabaayada ah.
Nadiifinta: Dusha sare ee hermetically xiran ayaa ka hortageysa in wasakhda soo baxdaa iyo lakabka dusha sare ee miraha ayaa fududeynaya nadiifinta. Huufle iyo xaaqin ayaa ku filan dayactirka maalinlaha ah. Iyo marmar xaaqin biyo yar iyo alaabooyin aan xoqin.
Rakibo Easy: Rakibaadda waxaa loo sameeyaa si deg deg ah oo fudud iyadoo la isku dhejinayo looxyada meel. Si loo rakibo iyaga sidoo kale ma aha lagama maarmaan in la saaro laami hore; Waxaa lagu rakibaa sibidhka, granite, vinyl, alwaax, iwm. waase haddii ay qallayl tahay oo ay heer tahay.
Sifooyin iyo tayo kala duwan. Waxaa jira noocyo ku filan oo lagu sheegi karo in la beddeli karo. Waxaan ka heli karnaa iyaga oo leh iska caabin dusha kala duwan si aan ula qabsanno si loo isticmaalo, oo leh iska caabin weyn ama ka yar oo huurka iyadoo ku xiran meesha loo rakibo, cabbirro kala duwan, iwm.
Sidee loo dhigaa sagxadda laminateerka?
Sagxadaha laminateerka ayaa la dul dhigi karaa sagxadaha kale ee sare, laakiin waxaad u baahan doontaa inaad hubiso in dusha sare waa heer iyo isku mid. Khasaaraha ugu weyn ee noocan ah ee sagxadaha noocan ah waa daciifnimadeeda kala-goysyada iyo helitaanka dusha sare ee isku midka ah waa furaha si aysan u furin ama u daboolin oo aysan u soo bandhigin walxaha gudaha, taas oo ah mid aan adkaysi u lahayn. Dusha sare miyaanu siman ahayn? Ku hagaaji sinnaan la'aanta wakhtiga hoobiye oo ku faafi koollada is-beddelka leh haddii kuwani ay ka sii adag yihiin.
Waxay kaloo soo baxaysaa waa lagama maarmaan in dusha sare uu qallalo; Haddii qoyaanku jiro, waxaa habboon in marka hore la xalliyo isha isku midka ah. Ma rabto inaad dabaq cusub dul dhigto mid kale oo xaaladiisu liidato taasoo ku dambayn doonta dhaawac soo gaadhsiisa kan ugu horreeya mustaqbalka dhow, sax?
Marka dusha sare la diyaariyo, sida loo dhigo sagxadda laminateerka waa su'aasha xigta. Looxyada sagxadda sagxadda leh ayaa aad u dhuuban, inta u dhaxaysa 7 ilaa 12 mm dhumucdoodu iyo rakibadeedu waa sabbaynaysaa, guud ahaan, oo leh nidaamka 'guji'. Gujitaan aan ka hadlayno waxay noqon kartaa:
xagal guji: sariiraha waxaa lagu soo biiraa iyadoo kor loo qaadayo gabalka xagal 45° oo ku dhejinaya carrabka jeexdin. Kadib markaad rakibto, waa inaad hoos u dhigtaa gabalka ilaa aad ka maqasho gujinta.
Dhagsi fudud: Dabaqyadu waxay ku nastaan ​​dhulka, iyagoon googo'a qaadin. Marka carrabka la geliyo booska, kaliya waa inaad riixdaa qaybta si aad ugu biirto midka xiga.
Sagxadda sagxadaha si fudud-u-gujiso waxay badbaadisaa wakhtiga rakibaadda iyo shaqada. Si aad u rakibto waxaad u baahan doontaa oo kaliya fidin dahaarka duudduuban qolka oo dhan, isaga oo ka tagaya in uu ka soo baxo 10 cm oo ka soo jeeda saldhigga derbiyada, oo dhig jeexjeexyada derbiyada ku xiga, si loo xalliyo kala-baxyada suurtagalka ah.
Marka la dhammeeyo, ku billow adigoo saaraya looxa ugu horreeya hal daraf ee qolka oo carrabku ku xigayo derbiga. Buuxi xariiqda koowaad dhinaca kale ee qolka oo ku dheji qaybo ka mid ah kuwa kale dhinaca isku dhafka ka dibna bilaw safka xiga. Soo bandhig dhammaan sagxadaha dhulka, ku dheji dhinacyada oo ku riix tabaha dhinaca godadka safka hore ilaa aad maqasho gujinta.
Markaa waa inaad dhammaystirtaa safafka lagama maarmaanka ah si aad qolka u dhammaystirto, buuxinta meelaha bannaan darbiga agtiisa leh looxyo yaryar oo aad ku goyso cabbirka gacan-gacmeed ama jigsaw.
Hadda oo aad ogtahay sida loo dhigo sagxadaha laminateerka, miyaad ku dhici kartaa inaad adigu sameyso?
Wadada buuxda ee maqaalka: Inicio » Qurxinta » Sida loo dhigo sagxadaha laminateerka ee qolalka dhexdooda
Isbeddellada fadhiga fadhiga ee 2022